Download DedaaBox - အွန်လိုင်းသင်ကြားရေး 1.17 APK - Android Education Apps
APK Downloader Apps Education DedaaBox - အွန်လိုင်းသင်ကြားရေး 1.17
DedaaBox - အွန်လိုင်းသင်ကြားရေး 1.17 APK
1.17 / January 20, 2020
DedaaBox App လေးကတော့ပညာရေးဆိုင်ရာဗီဒီယိုတွေစုစည်းပေးထားတဲ့နေရာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အလွယ်တကူ Download ဆွဲပြီးမိမိ Facebook Account နဲ့ Log inဝင်လိုက်တာနဲ့ဗီဒီယိုတွေစတင်ကြည့်ရှုလို့ရပါပြီ။ အွန်လိုင်းCertificate ရတဲ့ Mini-Certification ထဲက သင်တန်းတွေသင်ယူချင်မှသာလစဉ်ကြေးအနည်းငယ်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင်ခန်းစာတွေကလည်းထိပ်တန်းဆရာတွေကသင်ကြားပေးထားတဲ့အတွက်စိတ်ချယုံကြည်စွာသင်ယူနိုင်ပါပြီ!! အားပေးပါဦးနော်!လစဉ်ကြေးကိစ္စအတွက်တော့ ဖုန်း 09-970500857ကိုဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။ DedaaBox is the first Mobile App inMyanmar for Adult Education in Business & Language. DedaaBox(Total Learning App) will transfer knowledge and quality educationthroughout Myanmar! DedaaBox is alsoaplace for opportunitieswhere (1) the passionate learners can learn quality lessons and becertified after completion of the learning processes & (2) theresource persons can share their skills & knowledge by earningpassive income Together, we're creating an ecosystem where thelearners, trainers and the country itself can improve together!
App Information DedaaBox - အွန်လိုင်းသင်ကြားရေး
MAPCO Building, Junction of Strand Road & Mawtin, Beside Concrete Express Way, Lanmadaw (Seikkan) Township Yangon 11131
DedaaBox Show More...
Parla: Learn Spanish Free 2.0.23 APK
CDL Prep 7.4 APK